SIDA LOO DHAQSIYO SI DHAKHSO AH U KARIYO HADHUUDHKA GURIGA EE DIGSI: SIDA LOO DOORTO DHEGAHA, SIDA LOO KARSADO DHADHANKA, MARKAAD MILIX TAHAY? - KHUDRADDA
Cunnooyinka raashinka ah: sida ugu dhakhsaha badan oo loo kariyo hadhuudhka?
Khudradda qandacday ee la karkariyey ee ku yaala rugta ayaa ah raaxo aad uwanaagsan oo fara badan oo ficil ah. Nasiib darro, waxaad ku raaxeysan kartaa dhadhanka aadka u wanaagsan ee badarka oo keliya laba bilood oo sannadkii, sidaas darteed waa inaad hubisaa in dhadhankiisu ay la socdaan waxyaabaha laga filayo. U fiirso cuntooyinka ugu guulaha badan ee aad ku karineysid hadhuudhka habka caadiga ah - digsiga.
Noocyada iyo faa'iidooyinka sheyga
Corn waa mid ka mid ah dalagyada ugu muhiimsan beeraha warshadaha, taas oo inta badan ka muuqata miisaska cashada ee inta badan dadka adduunka ee hal qaab ama mid kale.
Badeecadu waa heer dhexdhexaad ah, kalsooni iyo nafaqo leh.. Inkasta oo miisaanka cunnada badani ku badan yahay hadhuudhka, waa shaki ku jiro inay tahay mid u qalma in la fiiriyo hadday ahaan lahayd sababtoo ah waxay ka kooban tahay qaybo badan oo fitamiino ah (kooxo B, PP, C, D, K, iwm) iyo raad raaco (fosfooraska, magnesium, copper, potassium), lagama maarmaanka u ah jirkeena sida hawada.
Iibsiga caadiga ah ee hadhuudhka, waxaad si weyn u yareyn kartaa halista qaadista cudurrada wadnaha, stroke, sonkorowga, hagaajinta hababka dheef-shiid kiimikaad ee jirka, sii murqyada indhaha ee ku dheggan (sababtoo ah maadada carotene, taas oo muhiim u ah aragtideena), iwm.
Xulashada iyo sameynta khudradda habka karinta
Si aad u samayso hadhuudh la kariyey runtii dhadhan fiican, waxaa lagama maarmaan ah ma aha in si fiican loo kariyo, laakiin sidoo kale dooran midka saxda ah. Cunnooyinka hadhuudhka ah iyo midhaha casiirku waxay noqon doontaa ilaa iyo dhamaadka xilli-ciyaareedka, kaas oo dhacaya dhammaadka bisha Ogos. Xilliga ka dib, hadhuudhka roogaga ee kiisaska intooda badan waa la gooyn doonaa, sidaa darteed, adag tahay.
Wixii karinta ee digsi, cobs yar yar ayaa ku haboonoo leh cagaar jilicsan ama midab cadi ah. Waa inaad sidoo kale fiiro gaar ah u yeelataa muuqaalka iyo xaaladda miro: waa inay noqdaan kuwo dhexdhexaad ah isla markaana waqti isku mid ah jilicsan, cadaadis badan oo isku dhafan.
Aqoonsiga "dhallinyarada" ee ku yaala rugta waa mid aad u fudud: waxaad u baahan tahay inaad si tartiib ah u cadaadiso caarada ciddida farankeeda, kaas oo ay tahay in uu jiro dareeraha dareeraha ah, sida caanaha.
Waxaa ugu fiican in la iibsado xaqiiqda hadhuudhka caleemaha, taas oo, habka, waa in aanay noqon qalalan oo ka danbeeya cob.
Ka hor intaadan si toos ah ugu soconin habka loo kariyo hadhuudhka, waa lagama maarmaan in si fiican loo maydho biyo socda, ka dibna nadiifi caleemaha iyo boogaha. Haddii la rabo, kabaha ayaa laga tegi karaa iyada oo la gooyo caleemo khafiif ah ama wasakhaysan oo keliya: sidaas awgeed hadhuudhku wuxuu haysanayaa casiirnimo dheeraad ah (sida loo kariyo hadhuudhka si habboon, sidaas darteed waa jilicsan oo casiir leh, waxaan u sheegnay maqaalkan).
Ka hor inta karkarinta koollada, waa in la rusheeyaa 40-60 daqiiqo biyo qabow. Wixii karinta waa ka wanaagsan tahay in la qaato cobs ee cabbirka isku mid ah si ay si siman loo kariyo.
Siyaabaha, sidee baad u karisaa dhadhanka guriga?
Karkari oo aan cusbo lahayn
Ka hor inta aanaan lagu darin hadhuudhka, waa in si fiican loo dhaqo loona nadiifiyaa caleemaha wasaqda leh, caleemaha dhaawacmay. Wixii karinta hadhuudhka ugu fiican ee diirran oo dhoobo ah oo bir ah. First of dhan, koollada waxaa loo dhigay si adag ku filan ku galay, ka dibna ku shubay biyo qabow (waa in ay daboolaan cobs on top by 2-3 cm). Masaasku wuxuu daboolayaa dabool.
Ka dib marka la karkariyo biyaha, dabka waa in la yareeyaa ugu yaraan, sababtoo ah hadhuudhka aan la karin karin kuleylka sarreeya. Waqtiga cuntada waa caadi ahaan wax ka badan 15 daqiiqo.. 5 daqiiqo ka hor intaan badeecada la diyaarin, waa in la dhajiyo biyo. Si aad u sameysid hindhistaadyo badan, waxaad ku dari kartaa sonkor ama subag yar inta lagu jiro karinta.
Go'aami diyaargarowga hadhuudhku wuxuu noqon karaa, u leexan karaa fargeeto dhowr ah oo miro ah isla markaana tijaabi. Ka dib karinta, uma baahnid inaad isla markiiba qaadato hadhuudhka digsiga: u sii yar "nasasho". Sidaas darteed badeecadu waxay noqon doontaa mid jilicsan oo jilicsan. Hilibka la kariyey wuxuu miiska saaran yahay miis. Haddii la rabo, waxaad ku dufin kartaa subagga oo ku rushaysaa basbaaska madow.
Dad badan ayaa aaminsan in hadhuudhka, lid ku ah, waa in la cusbooneysiiyo bilowga cunto karinta, oo aan dhammaad lahayn, taas oo macnaheedu yahay in qashinka noocaas ahi uu mudan yahay. Sida laga soo xigtay ee cuntada, hadhuudhka loo isticmaali karaa sida caanaha, iyo ripeness dhexdhexaad ah (weli caddaan, laakiin hore u bislaaday).
Badeecada si fiican ayaa loo nadiifiyaa caleemaha iyo weelasha (iskumida dhammaan kabaha aan loo baahnayn, ka tago caleemaha kuwaas oo u dhawaa koollada, waxay noqon doonaan kuwo faa'iido leh inta lagu jiro habka karinta).
Qashin qoto dheer oo diirran (doorbidayaa birta). Lakabka yar ee caleemaha ayaa la dhigaa dhinaca hoose, ka dibna kabaha cobsiyada hadhuudhka ah, kuwaas oo daboolaya kor ku xusan lakabka lakabka ah ee caleemaha.
Corn wuxuu ku shubay biyo (uma baahnid biyo badan, waa in ay daboolaan kobcinta) oo si deeqsinimo leh loo cusbayn.
Biyaha waa in la keenaa karkar, ka dibna yareeya kuleylka iyo isku kari ilaa 20 daqiiqo (dhalinyaro) ama 40-50 (kaadadan).
Kadib dhammaadka karinta 10-15 daqiiqo, hadhuudhka ugu wanaagsan ayaa ka hadhay daboolka biyaha.
Waxaad u adeegi kartaa mid kulul, oo la miiray subagga, ama qabow (kiiskan, hadhuudhka waxaa lagu hayaa biyo qaboojiyaha ilaa iyo inta laga helayo miiska).
Faahfaahin ku saabsan sida loo kariyo cobsiyada hadhuudhka ee milixda leh cusbada, ka akhri waxyaabahan.
Mug leh jiis
Saxan aad u macaan leh oo dhadhan fiican leh ayaa la heli karaa haddii aad wax yar u kala bixisid qashinka caadiga ah ee lagu kariyo hadhuudhka digsi. Si aad u diyaariso 4 cobs hadhuudh aad u weyn waxaad u baahan doontaa:
Cheddar ama jinsi adag - 50 g.
Meelo - 4 kobcaya.
Saliid, subagga dhadhanka.
Nadiifi cobska caleemaha iyo weelka, ku rid dheriga dhuuban, oo ku dabool biyo qabow.
Isku kari kari kadibna karkariyo kulayl yar ilaa 20 daqiiqo - haddii cobsku uu yaryahay (ku saabsan sida iyo inta ay le'eg tahay qoob-ka-soo-saarka dhalinyarada ee la kariyey, waxaad ka heli kartaa halkan).
Ka saar liinta liinta laga bilaabo liin, waxay ku duudduubtay hargabka ganaaxa.
Si yaryar u jarjartir caleemo leh mindi.
Cheese xoqin, sida jest, on hayso ganaax.
Isku qas maaddooyinka, ku dar milix aad u dhadhamiso.
Ka tag maqsuudda dhameysatay digsiga muddo 10 daqiiqo ah, ka dibna ku dheji saxanka, dufan leh subagga iyo duudduuban ee isku dhafka liinta.
Cuntada aan caadiga ahayn, laakiin waa mid aad u macaan leh oo hadhuudh ah oo ku taal digaagga digsi. Waxaad u baahan doontaa waxyaabahan soo socda:
Corn cobs - 6 pcs.
Caanaha - 2 litir.
Butter - 1 tbsp. qaaddo.
Salt - dhadhamin.
Corn waa in si buuxda loo diiriyo.
Kadibna ku rid digsi diirran oo diirran, ku shub caanaha iyo subagga ku dar. Dufanka hadhuudhku wuu ka qaxaa kulaylka yar.
Kaddib marka caanaha la kariyo, badeecadda waxaa la kariyaa qiyaastii nus saac (marmar waxay hubisaa diyaargarowga, maaddaama caanuhu hoos u dhigto geedi socodka karinta).
Iskuulka diyaarka ah ayaa la dhigaa saxan iyo cusbada. U adeegso kulul.
Baro sida loo doorto cobsiyada hadhuudhka loogu talagalay karinta, iyo sidoo kale arag cuntooyinka ugu fiican, halkan.
Waxaa jira tiro badan oo cuntooyin ah oo lagu karsado hadhuudh la kariyey. Waxaan kugula talineynaa inaad akhriso maqaalkeena sida loo saxo iyo waqtiga intee le'eg waa in la kariyaa digsi ku saabsan noocyada kala duwan ee Bonduelle, iyo sidoo kale miro kaliya oo aan madaxa ka mid ah kaabajka.
Sidee cuntada loogu kariyaa guriga?
Haddii hadhuudh la dhammeeyey oo aan la cuni karin midna fadhiya, waa muhiim inaad ilaaliso amniga alaabta. Sidaas darteed dhadhanka ah ee kernel hadhuudh aan la burburin, cob waa in si gaar ah loogu kaydiyaa qaboojiyaha. Sidaa darteed, waad ka tagi kartaa biyaha oo ay la karkariyey, ama waxaad ka heli kartaa "haraadiga raaxada" ka baxa biyaha, qalaji oo ku duub fiyuusta xayawaanka ah (mid walba gooni gooni). Foomkan, sheyga waxaa lagu keydin karaa ilaa 3 maalmood.
Waa sahlan tahay inaad kuleysatid hadhuudhka: waxaad ku sameyn kartaa barkada biyaha ama adigoo u diraya mikrowave muddo hal daqiiqo ah.
Si loo kariyo khudaarta si dhakhso ah, waa lagama maarmaan in horey loo qoyno 40-60 daqiiqadood oo dooro dhalooyin yar yar oo lagu kariyo.
Hadda waxaad taqaanaa sida loo kariyo hadhuudhka digsiga, si loo ilaaliyo dhammaan waxyaabaha nafaqada ah iyo in la gaaro dhadhan macaan oo macaan. Dhibaatooyinka adag ee tijaabada ah!